Hebei Mingda Shirkadda Ganacsi ee Caalamiga ahi waa shirkad ganacsi oo ku takhasustay qalcadaha, dembiyada iyo qaybaha mashiinnada.
Waxaan xiriir ganacsi oo qoto dheer la leenahay waxsoosaarka magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha, sidaa darteed waxaan aad ugu qanacsan nahay oo aan ku kalsoonahay inaan noqono nooc alaabada wax lagu tuurayo si aan awood ugula yeelano inaan la kulano macaamiisheena inta ugu badan quuslinta iyo waqtiga gaarsiinta.
Shirkadda Hebei Mingda International Trading Company waxay u shaqeysaa sidii shirkad gaar ah oo duulimaad ku leh dhammaan noocyada kaladuwan.
WAXAAN KU SAMEYN KARAA
Wax soo saarkayaga waxaa ka mid ah nooc kasta oo shey ceyriin ah oo laga sameeyo bir ductile, iron iron, steel, bir daxalan iyo aluminiin, qalcado mashiinno iyo qaybo been abuur ah. Si looga dhigo qeybahan sida ku xusan sawirada macaamiisha, waxaan leenahay farshaxanno soosaara oo ku habboon iyo qalab, sida ciid qoyan, caar ciid, sanaadiiqda kulul, sheyga lumay, luminta iyo wixii la mid ah.
Khaas ahaan unugyada jirka ka shaqeeya iyo unugyada waalka, waxaan soo aruurinay khibrad hodan ah alaabooyinkan sanadkii lasoo dhaafay ee wax soo saarka dhabta ah, Hada waxaan ku faraxsanahay agabkeena alaab wanaagsan oo tayo sare leh. Si kasta ha noqotee, waxaan isku dayeynay intii karaankeyga ah si aan u siino macaamiisheenna adeegyo tayo wanaagsan oo tayo leh anagoo kordhinayna farsamooyinka wax soo saarka iyo xakamaynta tayada si taxaddar leh.
Marka laga reebo shuruudaha iibsadayaasha, waxaan sidoo kale leenahay nadaamkeena tayada adag oo aad u adag, Taasi waxay hubineysaa in dalabka iibsaduhu uu noqdo mid aad u muhiim ah isla markaana si sax ah loo sameyn karo iyadoo loo eegayo heerarkeena tayada aasaasiga ah. Tani waxay ku kaydsanaysaa waqti iyo lacag badan labada dhinacba. Laga soo bilaabo ilaa iyo aasaaskii, alaabaheena si aad ah ayey u aqoonsan yihiin macaamiisheena, Waqtigaan waxaan ku guuleysanaa sumcad wanaagsan warshadaha tuurashada iyo mashiinada qof kastoo ka socda macaamiisha ama shuraakadayada.
Hadda alaabteena ayaa u dhoofinaya Jarmalka, Sweden, UK, Denmark, France, USA, Bariga Dhexe, iyo wixii la mid ah.
Waxaan haysannaa fursado badan oo warshado ah iyo tas-hiilaad shaqo oo nala jooga dalka Shiinaha, waxay naga caawineysaa inaan ogaano farshaxanka soo saarista iyo dhismayaasha ku habboon waxsoosaarka macaamiisheena iyadoo loo eegayo sawiradooda iyo awoodooda tayada. Markaa tani waxay ina siinaysaa dhinac dadka kale in macaamiisha ay had iyo jeer ka helaan badeecada ugu tayada wanaagsan qiimaha ugu wanaagsan.
DIINTA / WAQTI WAQTI
Waqtigayaga caadiga ah ee hogaaminta ayaa ah 30 maalmood laakiin kiis gaar ah oo ku saabsan dalabka iibsadaha, Waxaan sameyn karnaa wax aan caadi aheyn 20 maalmood gudahood sidoo kale inaan kaga badbaado iibsadeheenna qiimaha badan culeyska qiimaha xamuulka dheeriga ah ee hawada.
Rajineyso In Si Aad Ku Hesho Raxmaddaada Mahadcelin Ah Jawaabtaada Markii Ugu Horaysay!